Hay’adda laanqayrta cas Kenya oo codsatay 8 milyan oo lagu caawinayo shacabka 17 ismaamul – The Voice of Northeastern Kenya
Hay’adda laanqayrta cas Kenya ayaa maanta bilowday olole codsi oo ku aadan in la caawiyo in ka badan hal milyan oo qof oo ku nool 17 ka mid ah dowlad deegaanada dalka.
Xoghayaha guud ee hay’addan laanteeda Kenya, Cabbaas Guuleed ayaa sheegay in dad badan ay u dhinteen waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaajo iyo saameynta ka dhalatay abaaraha.
Laanqayrta cas Kenya waxay doonaysa inay hesho lacag dhan 824,554,720 shilin oo ay ugu taageerto dadka gaajeysan ee ku nool ismaamulada kala ah Wajeer, Tana River, galbeedka Pokot, Tharaka Nithi, Samburu, Nyeri, Marsabit, Laikipia, Mandera, Lamu, Kitui, Kilifi, Isiolo, Garissa, Embu, Baringo iyo Turkana.
Mr .Guulled ayaa hoosta ka xariiqay in saameynta ugu badan ay ka jirto deegaanka Tiaty ee ismaamulka Baringo, Loyangalani oo ka tirsan Turkana iyo sido kale Wajeer.
Waxaa gudaha dalka si weyn looga hadal hayaa cuno yarida iyo biyo la’aanta ka jirta deeganaada qaar in kastoo ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto uu sheegay inuunan jirin qof Kenyaan ah oo gaajo u dhintay.
Qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitarka ee Hay’adda laanqayrta cas Kenya ayaa lagu sheegay in laba toddobaad ka hor dadka ay abaartu saameysay ay tiradoodu ahayd 800,000 haddana ay kor u dhaafayso 1.1 milyan sidaasi awgeedna aanan la sii sugi Karin inay tiradaasi kororto oo la joogo xilligii wax la qaban lahaa.
Hay’adda ayaa sheegtay in ilaa iyo bisha sagalaad ee sannadkan ay diiradda saari doonto wax u qabashada 300 oo kun oo qof oo saameynta ugu weyn ay soo gaartay.
25,000 oo ah qoysas aanan haysan cunno ku filan ayaa si toos ah lacago cadaan ama kaash ah loo gaarsiinaya.
10,000 oo ah qoysas dheeraad ah ayaa si guud cunnooyin loogu qeybinaya gaar ahaan kuwa aanan ka faaiideysan barnaamijka dowlaladda ay lacagaha ku siiso waayeelada iyo inta kale ee dhibaatooyinka u nugul.
Lacagahan ayaa sido kale lagu qarash gelinayaa adeegyada biyaha , daawooyinka iyo nadaafadda.
Waxaa dayactir lagu sameynayaa 20 ka mid ah meelaha ay bulshadu biyaha ka helaan.
20, 000 oo qoys ayaa la siin doonaa daawooyinka biyaha wasaqda iyo jeermiska looga saaro.
Carruurta ay nafaqo darrada haysa, haweenka uurka leh iyo hooyooyinka caruurta nuujinaya ee ka midka ah ilaa iyo 25,000 oo qoys ahaa daryeel caafimaad la siinaya.
Waxaa sido kale la tallaalayaa xoola ay dhaqdaan 1,500 oo qoys oo reer guuraa ah.
← madaxweyne kuxigeenka dalka wiliam ruto oo booqanaya ismaamulka mandera.
Waaxda cadaaladda ee Maraykanka oo u yeertay madaxda shirkadda diyaaradaha ee Boeing →